अक्षकुमार बने अहिलेसम्मकै महँगो हिरो, एउटै फिल्मको पारिश्रमिक १२० करोड ! — Bhaktapurpost.com
अक्षकुमार बने अहिलेसम्मकै महँगो हिरो, एउटै फिल्मको पारिश्रमिक १२० करोड !
भक्तपुरपोष्ट संवाददाता७ माघ २०७६
बलिउड अभिनेता अक्षयकुमार पछिल्लो समयका निकै व्यस्त छन् । अन्य सुपरस्टार वर्षमा एक फिल्म दिन सफल छन् । तर उनले वर्षमा ३ वा ४ फिल्म दिने गरेका छन् । त्यो पनि सुपर हिट ।
गतवर्ष अर्थात २०१९को कुरा गर्ने हो भने उनी बलिउडको सबैभन्दा बढी कमाउने अभिनेता समेत बने ।
अक्षयकुमार अहिले रोहिट शेट्टीको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ अभिनय गरिरहेका छन् भने निर्माता निर्देशक आनन्द एलरायले आफ्नो नयाँ फिल्मका लागि पनि उनलाई साइन गरेको चर्चा छ । आनन्दको फिल्ममा सारा अलि खान र धनुषको पनि अभिनय रहनेछ ।